पहिलो भेटमा विवाह गरे, महिनौं पछि श्रीमती पो’र्न स्टार रहेको थाहा पाएपछी …. – Online Khabar 24
पहिलो भेटमा विवाह गरे, महिनौं पछि श्रीमती पो’र्न स्टार रहेको थाहा पाएपछी ….
एक व्यक्तिलाई पहिलो नजरमा नै एक युवतीसँग प्रेम बस्यो ।
एक दिनको दोस्ती सम्बन्धमा परिणत भयो उनीहरुले विवाह गरे । यद्यपि, ती व्यक्ति त्यतिबेला चकित परे जब आफूले विवाह गरेकी युवती कुनै बेला चर्चित पो’र्न स्टार रहेको थाहा पाए ।
यो घ’टना बेलायतको हो । ३४ वर्षकी एमी क्रिस्टोफर्सले २६ वर्षका जोश नाम भएका युवकसँग विवाह गरिन् । इ–४ को शो (म्यारिड एट फर्स्ट साइट) मा भाग लिनुभन्दा अघि एमीले कम बजेटका थुप्रै ए’क्स–रे’ड फिल्ममा काम गरिसकेकी थिइन् ।
एमीले ‘ब्रान्डी ब्रेवर’ नाम प्रयोग गरिन् र थुप्रै एड’ल्ट फिल्ममा कलाकारको रुपमा काम गरिन् । उनको यस्तै ए’क्स रे’टेड पहिलो फिल्मको सुटिङ त्यतिबेला भएको थियो जब उनी २५ वर्षकी मात्रै थिइन् ।​ एमीको अतितबारे थाहा पाएपछि उनका श्रीमान् जोशका साथीले भने, ‘उनलाई ‘जोश’ यसै हप्ता एमीको पृष्ठ भूमिबारे थाहा भयो ।
पहिल्यै नै यसबारे जानकारी पाउन आफू चु’केको जोश बताउने गर्छन् । अब उसले ‘हामी सबैको एउटा अतित हुन्छ’ भन्ने बारे विचार गरिरहेको छ ।’यस्तै एमीकी एक साथीले द सनसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘एमी एक पो’र्न स्टार थिइन् र सधैं आफ्नो ए’क्स–रे’टेड भूमिका सार्वजनिक भए, के होला भनेर सोच्थिन् ।
तर अब सबैकुरा विगत भइसकेको छ ।’ ‘आफ्नो वि’गतले उनलाई सधैं पोल्ने गर्दथ्यो,’ उनले भनिन् ।​ एमीकी साथीले भनिन्, ‘यो त्यस्तो कुरा हो जुन नयाँ साथीलाई भनिहाल्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा उनका श्रीमानलाई एक्लै छोडिदिनुहोस् ।’जुन कार्यक्रममा एमी र जोशेको उपस्थिति थियो त्यसमा जोडी सिधै विवाहको मण्ड’पमा भेट्छन् । उनीहरु पूर्ण रुपमा एक अर्कासँग अप’रिचित हुन्छन् । अपरिचितको रुपमा नै विवाह गर्छन् र हनिमुनमा जान्छन् ।
त्यसपछि एक–अर्कालाई राम्रोसँग चिनेपछि सम्ब’न्धवि’च्छेद गर्ने कि नगर्ने भनेर उनीहरुले निश्चित गर्छन् । यस्तै यो कार्यक्रममा एमीले जोशलाई भेटेपछि आफू चन्द्रमामा भएको जस्तो महसुस गरिरहेको बताएकी थिइन् । त्यतिबेला उनलाई इन्गेजमेन्ट गरिसकेका प्रेमीले छोडिदिएका थिए ।हाल प्रसारणमा नै रहेको यो शोमा यी दुई सँगै बस्न थालेपछि आजकाल झग’डा हुन थालेको छ ।एमीको असाध्यै मुड स्वि’ङ हुने कुरा जोशलाई मन नपरेको बताउने गर्छन् । साभार गरियको खबर
Prevशा’री’रिक सम्प’र्क गर्ने उत्तम समय कुन होला ? के समयले सम्पर्कमा प्रभाव पार्छ ?
nextतल दम्कल, आर्मी प्रहरी तयारी अवस्थामा देख्दा रु’वा’बासी चल्यो, ज्या’नको माया मा’रेका थियौं !